Ama-Wheel Loader, ama-Front End Loader, ama-compact Wheel Loader - iJufenglong
ibhizinisi eligxile ekukhiqizeni ama-loaders namaloli wokuxuba azondlayo.
Imikhiqizo yochungechunge lwe-LEHMAN esindayo esindayo, zombili izesekeli ezihambisanayo ezihamba phambili zasekhaya nezamazwe omhlaba, ikhwalithi ethembekile, ihlangabezana nemfuneko yokwenziwa komuntu, ithuthukise amahhovisi emazweni angaphezu kwayishumi emhlabeni jikelele, futhi imikhiqizo yayo ithunyelwa emazweni angaphezu kwezi-20 kanye nasezifundeni ezinjengeNdiya , lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia naseBrazil.
Le nkampani inamandla aqinile aphelele, ihlanganisa ucwaningo lomkhiqizo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo, futhi iyahola ekutholeni amalayisense akhethekile okukhiqiza nokwenza amalayisense nge-eu CE certificatin, isitifiketi sohlelo lwangaphakathi lwe-ISO9001
Iloli lokuxuba elizimele
Lo mkhiqizo ungathatha indawo yamasethi e-generator, ama-loaders, ama-mixers namathangi. Kanye nabasebenzi abangaphezu kwabayisithupha, isizukulwane esisha semikhiqizo ehola phambili embonini yokwakha.Ithangi lingazungeziswa ngama-degree angama-270 kungabikho mingcele emaceleni amathathu.
Uhlaka oluqinisiwe, isikhungo sokusabalalisa amandla adonsela phansi sinengqondo, amandla wokuthwala anamandla.
ukuhweba kwamanye amazwe
imikhiqizo lithunyelwa emazweni angaphezu kuka-20 kanye nezifunda ezifana India, lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia kanye neBrazil.
Imishini yokushisela i-Robot othomathikhi ukuqinisekisa ikhwalithi ye-welding, i-weld uniform uniform, i-welding eqinile.
inkampani yethule i-German Fully Automatic Laser Cutting nemishini yokuvala isikhala nemishini yamarobhothi ye-Welding yaseJalimane.
Ukusebenza kweLoader amathiphu ayisithupha okwenza ube yi-g ...
04 Septhemba, 20
Umqhubi ophethe kahle angakwazi ngokucacile ukuthi angawusebenzisa kanjani kakhulu umshini lapho eshayela umlayishi, anciphise ukugqoka komshini, anciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli, futhi aqedele umsebenzi kahle futhi ngokushesha. Izindlela eziyisithupha t ...
Isigaba seLehman: Kusetshenziswa Amakhono Wokulayisha ku ...
I-Loader uhlobo lomhlaba ozihambelayo nolayisha ngamatshe nokulayisha imishini esetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi wokwakha afana nemigwaqo emikhulu, ujantshi, ukwakhiwa, ugesi, amachweba, izimayini, njll.
SHANYI LENHAM “shine” 2019 Ch ...
Kusukela ngo-Okthoba 30 kuya kuNovemba 1, i-China China International Agricultural Machinery Exhibition, exhaswe yiChina Agricultural Machinery Circulation Association, China ...
Irediyetha enkulu kakhulu: Irediyetha isebenzisa uhlelo lwamazwe omhlaba oluzihambile lokushisa ukushisa oluzimele ukuqinisekisa ikhwalithi kawoyela nokulawula izinga lokushisa. Irediyetha yesayizi yomuntu: Isikhangiso se-Radiator ...
Kukhona abasebenzi abangaphezu kuka-80 abaphakathi nabaphezulu kwezobuchwepheshe embonini, abasebenzi abangaphezu kuka-700, kanye nethimba eliqinile locwaningo lwesayensi eliqinisekise ucwaningo nentuthuko yenkampani ezimele, ikakhulukazi ukubambisana kwesikhathi eside wth clleges university and universitieThus, ikhwalithi ephezulu ibhizinisi lakhiwa.
THOLA IFOMU YEKHOTI
Ama-Wheel Loader, Izimayini Zesivinini Samasondo, Ama-Bell Wheel Loader, Amasondo Loader For Rent, Isixhumi Sokukhonkolo Esizimele, I-Compact Wheel Loader,